'कोरोनाको महामारी रोक्न सक्यौं भने अर्थतन्त्र उकास्न गाह्रो नहोला'
अनुपमा खुञ्जेली, सीईओ- मेगा बैंक लिमिटेड
झण्डै दुई वर्षअघि मेगा बैंकको सिईओ बन्दा अनुपमा खुञ्जेलीले नेपालमा कमर्सियल बैंकका पहिलो सिईओ बनेर इतिहास रचेकी थिइन् । झण्डै तीन दशकदेखि नेपालमा बैकिङ्ग क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनी आफ्नो सफलताको श्रेय अवसर र कडा मेहनतलाई दिन्छिन् ।
२९ वर्षअघि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी उनी एक दशकपछि नबिल बैंकमा वरिष्ठ व्यवस्थापकको रुपमा काम गर्न थालिन् । मेगा बैंकको स्थापनासँगै उनले त्यहीँ काम सुरु गरिन् । सेन्ट मेरीबाट अध्ययन सुरु गरेकी उनी उच्च शिक्षाका लागि भारत गइन् र नेपाल फर्किएर शंकरदेव क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरिन् । पछि एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट व्यवस्थापकीय प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरिन् । उनीसँग कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा साझापोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
कोरोनाको महामारीले विश्वलाई नै आर्थिक महामन्दीतिर धकेलिरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्ला ?
आर्थिक क्षेत्रमा त अहिलेको निम्ति सबै विश्व लकडाउन भएको हुनाले यसको असर ठूलै पर्छ । अमेरिकामै बेरोजगारको संख्या धेरै हुन्छ भनिरहेका छन् । विश्वकै अर्थतन्त्र नै मन्दीतिर जान्छ भनिएको छ । त्यसैले नेपालमा असर नपर्ने कुरै भएन ।
नेपालमा पर्ने असर कस्तो होला ? कोरोना महामारीको अन्त्यपछिको नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो होला ?
अहिले सबै व्यापार व्यवसायहरु ठप्प छ । निर्माण, उत्पादन लगायत सबै व्यवसायहरु ठप्प छन् र यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन । त्यसैले अहिले नै ठ्याक्कै आँकडा दिन त गाह्रो होला । अब बैंकहरुले चौमासिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि भन्न सकिन्छ होला । कतिले ब्याज तिर्न सक्छन् होला, कतिले तिर्न सक्दैनन् होला । त्यो सबै कुराको आँकडाले प्रष्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट‍्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुसँग छलफल गरेर आर्थिक प्याकेज ल्याएको कारण पनि यही हो । सकेसम्म हामीले कम क्षतिमा सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्छ । गाह्रो चाहिँ संसारका सबै देशहरुलाई गाह्रो नै छ । निर्यात व्यवसाय ठप्प छ, एयरलाइन्स व्यवसाय ठप्प छ, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै व्यवसाय ठप्प छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको खास आधार आयात र रेमिटेन्स नै हो नि हैन ?
हो । अब रेमिटेन्स घट्न थालेपछि हामीलाई अर्को तनाव हुन्छ ।
खाडीदेखि सबैतिर ठप्प नै छ । यसले रेमिटेन्समा त स्वभाविक असर पारिहाल्छ नि हैन ?
निश्चितरुपमा असर पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र धानेकै रेमिटेन्सले हो भन्छौं । यो घटेपछि देशलाई असर त परिहाल्छ । तर हरेक अन्धकारको अन्त्यमा उज्यालो त हुन्छ नै । हाम्रो देशले पहिले पनि धेरै दुःख सहेको छ पहिले पनि । नाकाबन्दी, भुइँचालोदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट पार भएर आएका छौं । अबको संकटलाई पनि पार गरिन्छ । खालि मुख्य कुरा चाहिँ हामी सबै नेपाली स्वस्थ रहनुपर्‍यो । अहिलेको हाम्रो मुख्य कुरा नै यही हो । त्यसैले अहिले लकडाउनलाई पालना गरेर आफू र आफ्नो परिवार स्वस्थ राख्ने जिम्मेवारी सबैले बहन गरौं । इटाली, अमेरिका जस्ता देशमा कोरोनाको कहर जसरी फैलिएको छ त्यो कहर नफैलिइकन हामी उम्कियौं भने फेरि अर्थतन्त्रलाई उकास्न गाह्रो पनि नहोला ।
कोरोना महामारीका कारण नकारात्मक प्रभावसँगै केही अवसरको सिर्जना पनि गर्छ होला नि ?
हो । युवाहरु स्वदेश फर्किएलान् । स्वरोजगार होलान्, रोजगारीमूलक काम गर्लान् । खेतीपाती गर्लान् । हामी नेपाल कृषिप्रधान देश भन्छौं तर व्यवसायिक रुपमा सोचेकै छैनौं । साँच्चै नै कृषिप्रधान देश हो भन्ने हो भने हामीले यहाँ उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति जमीनमा काम गर्ने युवा शक्ति थिएन । अब कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि देशमै काम गर्छु भनेर विदेशबाट युवाहरु यहाँ आए भने त धेरै ठूलो परिवर्तन आउला । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि विदेशबाट फर्किएर आएका युवाहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, स्वरोजगारका लागि, व्यवसायका सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनेर बैंकहरुलाई भनेकै छ ।
एउटा आरोप त छ नि – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थतन्त्रको आधार विस्तार गर्न सकेनन्, उत्पादन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अनुपात असाध्यै कमजोर छ । महामारीपछि यसमा केही परिवर्तन होला ?
उत्पादनका क्षेत्रहरु भनेर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएकै छ । लगानी कति गर्नुपर्छ पनि भनेकै छ । त्यसैले बैंकहरुले त्यो पूरा गर्नैपर्छ । तर ऋण लिनेले सानै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भए पनि म यो काम यसरी गर्छु, यसरी कमाएर बैंकको ऋण तिर्छु भनेर प्रष्टसँग भन्नु त पर्छ । यसको चाहिँ कमी हो कि जस्तो लागेको छ । हामीले ‘मेगा लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर’बाट वित्तीय साक्षरता वृद्धिमा पनि काम गर्न शुरु गरेका छौं । महिला उद्यमशीलताकै कुरामा किन महिलाहरुले फाइदा लिन सकेका छैनन् होला भने उनीहरुले आफ्नो सानोतिनो व्यवसायको प्रोजेक्सन पनि गर्न नसकेको हो कि ? हामीले पनि सर्वसाधारणकै पैसा उठाएर ऋण दिने हो । त्यसैले पैसा लगानी गर्दा हामीले पनि विचार त गर्नैपर्छ । हामीले कहाँ लगानी गर्दैछौं, ऋण लिने व्यक्तिमा वित्तीय ज्ञान छ कि छैन भन्ने कुरा त विचार गरेर नै दिनुपर्‍यो नि । त्यसैले गर्दा पनि अलि विस्तारित नभएको होला ।
यहीबीचमा सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन भनेर । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो आर्थिक प्याकेजको घोषणाबाट ?
मलाई त यो आर्थिक प्याकेज सुनेर सरकारले साँच्चै नै व्यवसायीहरुलाई राहत दिन खोजेको जस्तो लागेको छ । उहाँहरुको मर्का बुझेर ब्याज भुक्तानीको समयलाई पर सारिएको छ । यसले व्यवसायीहरुलाई पक्कै राहत मिल्छ । अझ राम्रो गर्न सकिन्छ । अझै सबैले छलफल गरेर यसमा थप गर्न सकिन्छ । तर पहिलोपटक जुन प्याकेज आएको छ यो राम्रो छ ।
यो आर्थिक प्याकेजको बारेमा सरकारलाई केही सुझावहरु छन् ?
अहिले त कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ । मेगा बैंकले पनि सरकारले स्थापना गरेको केन्द्रीय कोषमा एक करोड र सातवटै प्रदेशलाई पाँच पाँच लाख गरेर ३५ लाख गरी कूल एक करोड ३५ लाख राहत सहयोग गरेको छ । यो सहयोगमा हाम्रा कर्मचारी, बोर्ड सबैको सहयोग छ । सहायक तहकाले २ दिनको, अधिकृत तहकाले ३ दिनको, व्यवस्थापक तहकाले ४ दिनको, वरिष्ठ व्यवस्थापक तहकाले ५ दिनको र बोर्डका सबैजनाले २५/२५ हजार गरेर कूल ३२ लाख सहयोग छ । बाँकी सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट सहयोग गरेका छौं । त्यसैले अहिलेको बेलामा सबैले आफूले सक्दो सहयोग पुर्‍याऔं । कोरोना भाइरस लागेर कोही पनि नेपालीहरु उपचार नपाएर हताहत नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै सहयोग गरौं । अहिले हामीले मुख्य ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने भनेको नै नेपालीहरुको स्वास्थ्यको विषयमा हो । आर्थिक क्षेत्रमा मन्दी, उतारचढाव त चक्रको रुपमा आइरहने कुरा हो । कहिल्यै पनि नसोचेको कोरोनाको प्रकोप संसारभरि नै छ । आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो प्रकोप कहिलेसम्म लम्बिन्छ हेरेर अझै राहतको प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ । खासखास क्षेत्रहरु केन्द्रित गरेर प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
लकडाउन र कोरोना प्रकोपले महिलाहरुमाथि पार्ने फरक प्रभाव चाहिँ कस्तो होला ?
गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ अहिले निकै गाह्रो परिरहेको छ । यातायात पूरै बन्द छ । त्यसैले गर्भवतीहरुलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । महिलाहरुले दोहोरो जिम्मेवारी लिइरहेका हुन्छन् । घरको जिम्मेवारीसँग कार्यालय, व्यापार व्यवसाय पनि चलाइरहेका महिलाहरु धेरै छन् । अहिले घरमा लकडाउन भएर बस्नुपर्दा आयस्रोतमा कमी हुँदा अप्ठेरो नै पर्छ । मुख्यतः घर चलाउनुपर्ने महिलाले नै हुन्छ । त्यसैले महिला दिदीबहिनीहरुलाई अप्ठेरो छ । तर हामीमा सहनशील शक्ति त छ । हामी समस्यासँग जुध्छौं र यसबाट पनि बाहिर निस्कन्छौं ।
कोरोना प्रकोपबाट जुधिरहेका नागरिक र मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई तपाईंको केही सन्देश छ ?
हामीले हाम्रा ग्राहकहरुको आवश्यकताअनुसार सबै शाखा व्यवस्थापकहरुको फोन नम्बरहरु वेवसाइटमा, फेसबुक पेजमा राखेका छौं । हरेक दिन ग्राहकहरुको आवश्यकताअनुसार हामीले शाखाहरु खोलिरहेका छौं । एटीएम, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका डिजिटल माध्यमबाट पनि भएन भने हामीलाई ग्राहकहरुले फोन गर्नुहुन्छ र हामीले शाखा खोलिरहेका छौं । ४३ जिल्लामा हामी विस्तारित छौं । हामीले हाम्रा ग्राहकहरुले चाहेको सेवा कुनै पनि रोकेका छैनौं । रेमिटेन्स पनि दिइरहेका छौं । कहिँकतै कमजोरी छन् भने हामीलाई खबर गरिदिनुहोला । यस्तो संकटको अवस्थामा हामी बैंकरहरु आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा गर्न तत्पर छौं । साथै सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला । स्वस्थ नेपाली भए मात्रै भोलि हामीले समृद्ध नेपाल देख्न सक्छौं ।